တိုင်းတပါးရောက်အတွေးစ - နည်းပညာ
2/21/2013 11:30:00 AM ကဗျာ No comments
ဘယ်သူအတွက်တွေလဲ? ဘာဖြစ်ချင်လို့ဘယ်လိုစိတ်အားထက်သန်မှု့ တွေရှိလို့ဒီကိုလာရတာလဲ? အနှောက်ယှက်မှန်သမျှ နင်ဘယ်လိုကျော်နင်းမလဲ? နင်ဘယ်လိုလူစားမျိုး ဖြစ်ချင်ဆုံးလဲ? ဘဝရဲ့ခါးသည်းမှု့ တွေကို နင်တယောက်တည်း ဖြတ်ကျော်ဖို့ သတ္တိတွေရှိသလား? နင်ဘဝအတွက်အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲ? နင်ဘဝတသက်တာလုံးအတွက်အရေးကြီးဆုံးလူတွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်မှာလဲ? မင်းမဟော်(ဒသန)ရေးသားကူညီပေးပါသည်